अवैज्ञानिक भएको विज्ञहरुको निचोड बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय , भन्छन्– ‘सरप्राइज भयो’ – Khabar PatrikaNp
अवैज्ञानिक भएको विज्ञहरुको निचोड बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय , भन्छन्– ‘सरप्राइज भयो’
July 22, 2020 260
सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी निकाय र जनस्वास्थ्य विज्ञहरुसँग सरसल्लाह नगरी कुनै तयारी विना नै बन्दाबन्दी खोल्नु अवैज्ञानिक भएको जानकारहरु बताउँछन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि ११ चैतदेखि लागू गरिएको बन्दाबन्दी सरकारले आजबाट खुला गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्‌ले मंगलबार मध्यरातदेखि बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
शिक्षण संस्था, सभा-सम्मेलन, सिनेमा हल लगायत मानिसहरुको भीडभाड हुने ठाउँ सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै छ भने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान १ भदौदेखि सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय छ।
सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरिएको बताए । तर, सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका वेला जनस्वास्थ्यबारे नसोची बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको विज्ञहरु बताउँछन्।
बन्दाबन्दी खुलेकाे पहिलाे दिन काठमाडाैकाे सडकमा सार्वजनिक यातायात ।
हिमालखबरले स्वास्थ्य मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र जनस्वास्थ्य विज्ञहरुसँग कुराकानी गर्दा सरकारले विना तयारी र कुनै सरसल्लाह नै नगरी बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) महामारीजन्य रोग नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । मुलुकमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिरहेका वेला के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर आवश्यक नीति र रणनीति तयार पार्दा ईडीसीडीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, सरकारले बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गर्नुअघि ईडीसीडीका अधिकारीसँग सल्लाह गरेन।
ईडीसीडीका निर्देशक डा‍. वासुदेव पाण्डेले बन्दाबन्दी खोल्ने बारेको निर्णय आफूले मंगलबार साँझ समाचार सुनेर थाहा पाएको बताए । उनले भने, “हामीले बन्दाबन्दी खोल्ने भनेर कुनै सुझाव दिएका छैनौं । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत बन्दाबन्दी खोल्ने विषयमा निर्णय भएको हुनसक्छ।”
अहिले सीसीएमसीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सीसीएमसीको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सीसीएमसीको बैठकमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले अझै दुई साता पर्खेर मात्र बन्दाबन्दी खोल्न सकिने धारणा राखेका थिए । तर, सीसीएमसीले बन्दाबन्दी तत्काल खोल्न सकिने भनेर सरकारलाई सुझाव दियो । यसबारे कुरा गर्दा श्रेष्ठले सीसीएमसीको बैठकमा आफूले दिएकाे सल्लाहबारे खुलाउन चाहेनन्। “बन्दाबन्दी खुलाउनेबारे सीसीएमसीले नै सरकारलाई सुझाव दिएको हो, यसबारे अरु थप भन्न चाहन्नँ”, उनी भन्छन्।
‘बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय सरप्राइज !’
सीसीएमसीमा बाहिरबाट जनस्वास्थ्य विज्ञका रुपमा काम गरिरहेकाहरुले समेत बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय हुँदैछ भनेर पत्तो पाएनन् । एक जना जनस्वास्थ्य विज्ञले भने, “बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय हाम्रा लागि पनि सरप्राइज भयो।” उनले सरकारले कुनै तयारी विना नै बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको र यसले आगामी दिनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
संक्रमणजन्य रोग तथा आईसीयू रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ वा छैन भनेर यकिन नगरी बन्दाबन्दी खोल्ने सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक भएको बताउँछन्।
“ईडीसीडीले एक साताअघि समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हुनसक्ने र त्यसका लागि समुदाय स्तरमा परीक्षण गनुपर्ने बताएको थियो” डा. अधिकारी भन्छन्, “तर समुदायमा संक्रमणको अवस्था के छ भनेर थाहा नपाई बन्दाबन्दी खोलियो।”
सरकारले बन्दाबन्दी खाेलेपछि सडकमा सबै प्रकारका सवारी चल्न थालेका छन् ।
उनी समुदायमा कोरोनाको संक्रमण पत्ता लगाउन एन्टीबडी जाँच्ने इलाइजा विधि र भाइरस संक्रमणबारे थाहा पाउने पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
तर, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले इलाइजा विधिबारेको निर्देशिका तयारी पार्ने र परीक्षणलाई अनुमति दिने काम अड्काएर राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म समुदायमा कोरोनाभाइरस फैलिए/नफैलिएको कसरी जाँच्ने भन्नेबारेमा वैज्ञानिक निर्देशिका पनि बनाएको छैन।
डा. अधिकारी भन्छन्, “अहिले लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरुमा पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । त्यसैले अहिले भएको कोरोना जाँचसम्बन्धी मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर खुकुलो पार्नुपर्छ, नत्र थाहै नपाई संक्रमण झन् बढ्न सक्छ।”
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समीरमणि दीक्षित सरकारले सावधानीका उपाय अवलम्बन नगरी सूचना विना एक्कासी बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गर्नु त्यति व्यावहारिक नदेखिएको बताउँछन्।
“बन्दाबन्दी त खोल्नु नै पर्थ्यो, तर कसरी खोल्ने र के के सतर्कता अपनाउने भन्नेमा ध्यान नदिएको पाइयो”, उनी भन्छन्।
Prevसरकार बन्दाबन्दी खोल्न बाध्य भएको हो त? कर उठाउने दबाबले?
Nextभगवान श्री गणेशका ११ स्वरुप, पूजा गर्दा के फल मिल्छ ?पढ्नुहोस
७ बर्ष पहिले काज क्रि*या गरिएकी महिला साउदीको जे*लमा जी*वित भेटिदा भयो हं*गा*मा । (हेर्नुहोस भिडियो)७ बर्ष पहिले काज क्रि*या गरिएकी महिला साउदीको जे*लमा जी*वित भेटिदा भयो हं*गा*मा ।
पाकिस्तानले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले दियो कडा जवाफ
कस्ता मानिसहरूले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्दछन ? पुरा पढ्नुहोस्